Turkish Airline oo dib u bilaabaysa Duulimaadyadeedi Muqdish | Baydhabo Online
Turkish Airline oo dib u bilaabaysa Duulimaadyadeedi Muqdish
Shirkadda Diyaaradaha Turkish Airline, ayaa qorsheynaysa inay dib u biloowdo Duulimaadyadii ay ku tagi jirtay Magaalada Muqdisho oo ay horay u joojisay Shirkada.
Ku xigeenka Kaaliyaha Wasaaradda Arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Cali Kamal Aydin, ayaa sheegay Qorshaha inuu yahay in Duulimaadyadii Turkish Airline ee Muqdisho in dib loo bilaabo.
Wuxuu sheegay sababta markii hore loo joojiyay inay tahay hubinta ammaanka Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho iyo hareerahiisa, kadib markii dagaalyahano ka tirsan Shabaabka la sheegay xilli habeen ah inay dhanka badda ka soo tuureen rasaas, ayna u soo rideen dhanka Garoonka Diyaaradaha Muqdisho.
Cali Kamal Aydin, wuxuu tilmaamay inay ku mashquulsanaayeen hubinta ammaanka Garoonka Muqdisho si aysan waxyeelo u soo gaarin dad aanan waxba galabsan.
Waxa uu tilmaamay in markii ay helaan xogo la xiriira in garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ammaan yahay ay dib u billaabi doonto Turkish Airline shaqadadeed, kana war sugayaan mas’uuliyiin xagga amniga qaabilsan oo Muqdisho ku sugan.
“Waxaan ku qasbannahay inaan hubinno amniga Garoonka Muqdisho iyo hareerihiisa, qatarna ma gelin karno nolosha dad aan waxbo galabsan” ayuu yiri Cali Kamal Aydin.
Inkastoo markii uu dhacay Qaraxii Diyaarada Daallo ammaanka Garoonka Aadan Cadde uu noqday mid qal qal ku yimid, ayaa hadana isbedelo kala duwan oo ay sameeyeen laamaha ammaanka Garoonka qaabilsan, waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka Garoonka diyaaradaha mugadishu